အမှတ်တရတွေ သိမ်းထားဖို့ အကောင်းဆုံး iOS Notes App လေးတွေ
30 Apr 2018 . 11:28 AM
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆိုပါ နေ့စဉ်နေထိုင်တဲ့ ဒီဘဝထဲမှာ အမှတ်တရတွေ၊ ထူးထူးခြားခြား သိမ်းထားချင်မိတဲ့ အခိုက်အတန့်၊ ခံစားချက်တွေရှိကြမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ လူတိုင်းနီးပါး လုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားရသမျှကို ခဲတံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ် Notebook ထဲမှာ ချရေးမိတာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ သီးသန့် မှတ်စုစာအုပ်တွေကို ဝယ်ပြီးတော့ ချရေးဖြစ်တာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှားပါးလာကြပါပြီ။ ဒါကလည်း အလုပ်တွေပင်ပန်းလာတာရယ်၊ အလုပ်က အပြန်အပန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရတွေကို ချမရေးဖြစ်တော့ပဲ Facebook လိုမျိုး Social Media ပေါ်ကိုပဲ တင်ပြီး Update လုပ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရတွေကို Social Media ပေါ်ကို ဓါတ်ပုံတွေ၊ Status တွေတင်မယ့်အစား သီးခြား Notebook Apps လေးတွေမှာပဲ ချရေးပြီး သိမ်းထားလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ၊ အမှတ်တရတွေက မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ချရေးသလိုပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဖွင့်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်လေ။
ကဲ… စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အခုပြောပြပေးသွားမယ့် Notes Taking Application တွေက စာရေးသူကိုယ်တိုင် အသုံးပြုကြည့်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သလို Reviews တွေလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ Feedback တွေရထားတဲ့ Apps လေးတွေပါ။ အခု App တွေက iOS မှာပဲ ရပြီးတော့ တချို့ App တွေပဲ Android မှာပါ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
(1) Evernote (iOS | Android)
အခု Evernote ဆိုတဲ့ Notes App ကတော့ ထွက်ထားတာလည်း အချိန်နှစ်နဲ့ချီပြီ ကြာသွားပြီဆိုပေမယ့် အခုအချိန်အထိ Features ပိုင်းတွေ၊ App Design ပိုင်းတွေနဲ့ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတဲ့အပိုင်းတွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အားသာချက်တစ်ခုက Account ဖွင့်ပြီး ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Android နဲ့ iOS Devices တွေမှာလည်း အလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီး ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ Notes တွေကို ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်မှာပါ။ အားနည်းချက်ဆိုပြီး ပြောလို့ရလောက်တဲ့ Features ဆိုပြီး မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်၊ သာမန် Notes အနေနဲ့ စာရိုက်တာတွေအပြင် ဓါတ်ပုံတွေ၊ Handwriting Notes တွေ နဲ့ Document Scan လိုမျိုး Features တွေက အကောင်းဆုံး Notes App တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။
အခု App ကတော့ iOS Devices တွေအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သလို $9.99 နဲ့ ဝယ်ယူအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူပြီး အသုံးပြုရပေမယ့် မတန်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရတဲ့ Notes App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Notes App တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုင်ယာရီတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Paint Tool တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
(3) Notebook – Take Notes, Sync
အခု Notebook App ကတော့ အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းတဲ့ Interface နဲ့ အခမဲ့ရယူနိုင်တာတွေကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Google Keep လိုမျိုး Notes App နဲ့ ဆင်တူပြီးတော့ List ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Notes တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း အရောင်နဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေထည့်သွင်းနိုင်တာကတော့ ပြောနေဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုကစပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှတ်တရတွေပဲဖြစ်ဖြစ် Social Media တွေမှာ တင်နေတာထက် ကိုယ်ပိုင် Notes App တစ်ခုထဲမှာပဲ မှတ်သားထားတဲ့အကျင့်လုပ်ကြည့်ရအောင်လား?
အမှတျတရတှေ သိမျးထားဖို့ အကောငျးဆုံး iOS Notes App လေးတှေ
ယောကျြားလေးပဲဖွဈဖွဈ၊ မိနျးကလေးပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူမဆိုပါ နစေ့ဉျနထေိုငျတဲ့ ဒီဘဝထဲမှာ အမှတျတရတှေ၊ ထူးထူးခွားခွား သိမျးထားခငျြမိတဲ့ အခိုကျအတနျ့၊ ခံစားခကျြတှရှေိကွမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုအခြိနျတှမှော လူတိုငျးနီးပါး လုပျဖွဈတဲ့အရာတဈခုက ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ခံစားရသမြှကို ခဲတံနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ မှတျစုစာအုပျ Notebook ထဲမှာ ခရြေးမိတာပါ။
ဒါပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာ သီးသနျ့ မှတျစုစာအုပျတှကေို ဝယျပွီးတော့ ခရြေးဖွဈတာက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ရှားပါးလာကွပါပွီ။ ဒါကလညျး အလုပျတှပေငျပနျးလာတာရယျ၊ အလုပျက အပွနျအပနျးဖွတေဲ့အခြိနျမှာလညျး ကိုယျ့ရဲ့ အမှတျတရတှကေို ခမြရေးဖွဈတော့ပဲ Facebook လိုမြိုး Social Media ပျေါကိုပဲ တငျပွီး Update လုပျဖွဈတာကွောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
အဲ့ဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့ အမှတျတရတှကေို Social Media ပျေါကို ဓါတျပုံတှေ၊ Status တှတေငျမယျ့အစား သီးခွား Notebook Apps လေးတှမှောပဲ ခရြေးပွီး သိမျးထားလိုကျရငျမကောငျးဘူးလား? ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ခံစားခကျြတှေ၊ အမှတျတရတှကေ မှတျစုစာအုပျတဈအုပျထဲမှာ ခရြေးသလိုပဲ ကိုယျတဈယောကျထဲ ဖှငျ့ဖတျကွညျ့လို့ရတယျလေ။
ကဲ… စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျ အခုပွောပွပေးသှားမယျ့ Notes Taking Application တှကေ စာရေးသူကိုယျတိုငျ အသုံးပွုကွညျ့ပွီး ကွိုကျနှဈသကျသလို Reviews တှလေညျး အရမျးကောငျးတဲ့ Feedback တှရေထားတဲ့ Apps လေးတှပေါ။ အခု App တှကေ iOS မှာပဲ ရပွီးတော့ တခြို့ App တှပေဲ Android မှာပါ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
အခု Evernote ဆိုတဲ့ Notes App ကတော့ ထှကျထားတာလညျး အခြိနျနှဈနဲ့ခြီပွီ ကွာသှားပွီဆိုပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိ Features ပိုငျးတှေ၊ App Design ပိုငျးတှနေဲ့ အသုံးပွုရတာလှယျကူတဲ့အပိုငျးတှမှော အကောငျးဆုံးဖွဈနတေုနျးပါပဲ။ အားသာခကျြတဈခုက Account ဖှငျ့ပွီး ကှနျပြူတာပဲဖွဈဖွဈ၊ Android နဲ့ iOS Devices တှမှောလညျး အလှယျတကူဝငျရောကျပွီး ကိုယျမှတျထားတဲ့ Notes တှကေို ပွနျပွီး ကွညျ့နိုငျမှာပါ။ အားနညျးခကျြဆိုပွီး ပွောလို့ရလောကျတဲ့ Features ဆိုပွီး မရှိဘူးလို့ ပွောလို့ရတယျ၊ သာမနျ Notes အနနေဲ့ စာရိုကျတာတှအေပွငျ ဓါတျပုံတှေ၊ Handwriting Notes တှေ နဲ့ Document Scan လိုမြိုး Features တှကေ အကောငျးဆုံး Notes App တဈခုလို့ ပွောရမှာပါ။
အခု App ကတော့ iOS Devices တှအေတှကျ သီးသနျ့ဖွဈသလို $9.99 နဲ့ ဝယျယူအသုံးပွုရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဝယျယူပွီး အသုံးပွုရပမေယျ့ မတနျဘူးလို့ ပွောလို့ မရတဲ့ Notes App တဈခုဖွဈပါတယျ။ Notes App တဈခုအနနေဲ့ ကိုယျပိုငျ ဒိုငျယာရီတဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုမယျဆိုရငျတောငျ အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပွီးတော့ အကောငျးဆုံးလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ Paint Tool တှလေညျးပါဝငျပါတယျ။
အခု Notebook App ကတော့ အသုံးပွုရတာ ရိုးရှငျးတဲ့ Interface နဲ့ အခမဲ့ရယူနိုငျတာတှကွေောငျ့ နာမညျကွီးတဲ့ App တဈခုဖွဈပါတယျ။ Google Keep လိုမြိုး Notes App နဲ့ ဆငျတူပွီးတော့ List ပွုလုပျနိုငျတဲ့အပွငျ Notes တဈခုခငျြးစီကိုလညျး အရောငျနဲ့ ခှဲခွားနိုငျပါသေးတယျ။ ဓါတျပုံတှထေညျ့သှငျးနိုငျတာကတော့ ပွောနဖေို့တောငျမလိုတော့ပါဘူး။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခုကစပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ အမှတျတရတှပေဲဖွဈဖွဈ Social Media တှမှော တငျနတောထကျ ကိုယျပိုငျ Notes App တဈခုထဲမှာပဲ မှတျသားထားတဲ့အကငျြ့လုပျကွညျ့ရအောငျလား?